Ogaden News Agency (ONA) – Guryaha midka ugu khayrka badan
Guryaha midka ugu khayrka badan
Aayada badan ayuu Ilaahay kaga hadlay xuquuqda agoonta iyo in loo gargaaro oo loo naxariisto, wuxuuna Ilaahay u ballan qaaday qofka dhaqaaleeya agoonta inuu leeyahay ajir farabadan.
Sheeka yar oo ka hadlaysa fadliga agoonta oo lagu qoray kitaab imaam Dahabi wuxuu sheegay;
Inuu nin nolol fiican ku noolaa isaga iyo caruurtiisa oo daganaa dalka Faaris uu geeriyooday kana tagay gabdho. Reeerkii agoonta ahaa ayaa ku dhibaatooday magaaladii, ka dibna xaaskii oo ka xun inay arkaan dhibaatada haysata oy ku wiirsadaan cadawgeeda ayaa ka guurtay magaaladii oo magaala kale tagtay. Waqti uu qabow badan dhacayo ayay magaaladii gashay. Gabdhihii ayay dhaxantii ka gaysay masjid laga guuray iyadiina waxay u raadisay waxay cunaan. Laba koox oo meel fadhida ayay u timid. Mid waxaa horfadhiya nin muslim ah oo ah sheekha magaalada, kooxda kalena nin majuus ah oo magaalada ka ah qasnaji. Muslimkii ayay ku horeysay oy ku tidhi; waxaan ahay gabadh muslimat ah gabdho agoon ah ayaanan uga imid masjidkaa ee na caawi. Wuxuu ku yidhi yaa garanaya waxaad sheegayso inuu run yahay. Waxay tidhi magaalada waan ku cusbahay qofna kama garanayo. Markay waxba ka weyday ayay iskaga tagtay iyadoo aad u murogaysan waxayna aaday ninkii majuuska ahaa oy intii oo kale u sheegtay. Wuxuu ku yihdi; adiga iyo gabdhahaagaba ila soo daga aniga. Halkii ayuu si fiican u nooleeyay oo raashin iyo dhar qurxoon u labisay agoontii.
Waxaa la yidhi habeenkii dambe ayuu ninkii sheekha ahaa wuxuu riyo ku arkay isagoo taagan qiyaamihii. Rasuulka CS ayuu arkay oo daar aad u weyn oo qiimi badan furihiisa haya. Wuxuu ku yidhii Rasuulkii Ilaahayow waxaan ahay nin muslim ah ee daartan i sii. Wuxuu ku yidhi Rasuulka CS markay kuu timid gabadha muslimadda ah ee agoonta wadata sow kuma aadan odhanin maxaa cadaynaya inaad tahay muslimad? Anigana ii keen caddayn inaad tahay muslim. Ninkii oo argagaxsan ayaa magaaladii dhex maray isagoo raadinaya gabadhii agoonta wadatay. Waxaa loogu tilmaamay inay la joogaan majuusigii. Markii loo keenay ayuu ku yidhi; waxaan ka doonayaa gabadha muslimada ah iyo caruurteeda inaad ii soo celiso. Wuxuu ugu jawaabay; lagama yaabana inaan kuu keeno sababtoo ah barakadoodii ayaaban arkaye. Wuxuu ku yidhi kun diinaar iga qaado oo ii keen. Haka yaabin ayuu ugu jawaabay, sababtoo ah qasriga aad ku aragtay riyada anigaa la’ii abuuray. Walaalhi aniga iyo ehelkaygiiba ma’aanan seexanin xalay ilaa aan ka islaamno gabadha horteeda.
Waxaanan arkay riyadii aad aragtay oo kale wuxuuna igu yidhi rasuulka CS; gabadhii muslimadda ahayd iyo ciyaalkeeda ma’idagay kula joogaan? Waxaan ku odhi haa rasuulkii Ilaahyow. Wuxuu igu yidhi Qasrigaa adiga iyo ehelkaaga ayaa iska leh, adiga iyo ehelkaagana waxaad tihiin ehlu janno.
Ninkii sheekha ahaa halkii ayuu ka dhaqaaqay isagoo aad uga murugoonaya fursadda uu is dhaafiyay.
Waxaa na sugaya agoontii shuhudada ee haloo tartamo kafaalshadooda. Nin walbow caruurtaada oo qoslaysa markaad daawato soo xasuuso kuwii ay naftood-hurayaasha nooga tageen.